ချင်ချီလာရှဉ့် - ဝီကီပီးဒီးယား
Chinchilla lanigera at the Wrocław Zoo in Poland
Range of Chinchilla lanigera and Chinchilla chinchilla.
ချင်ချီလာ (Chinchilla) သည် လှပသော ရှဉ့်ကလေးတစ်မျိုးသည် တောင်အမေရိကတိုက်ရှိ မြင့်မားသော အန်းဒီးတောင်တန်းများပေါ်၌ နေထိုင်သည်။ နူးညံ့သောသားမွေးရှိခြင်းကြောင့် ချင်ချီလာရှဉ့်ကလေးများသည် လူတို့၏ ရှာဖွေသတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံကြရလေသည်။ ဤရှဉ့်ကလေးမျိုးသည် ပူးအနွယ်ဝင်ဖြစ်ပြီးလျှင် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ခုန်၍ ခုန်၍ သွားတတ်သည်။
အရွယ်မှာ နှာဖျားမှ အမြီးဖျားအထိ ၁၅ လက်မခန့် ရှိသည်။ သားမွေးမှာ နူးညံ့ပျော့ပျောင်း၍ ပုလဲရောင်ရှိ၏။ ချင်ချီလာရှဉ့် ၏ အဓိကအစာမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသာ ဖြစ်၏။ မြေတွင်းတွင် နေထိုင်သော်လည်း လှပသောကိုယ်တွင် အမှိုက် သရိုက် အညစ်အကြေးများ ကပ်ငြိနေခြင်း မရှိပေ။ အမြဲတစေ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်နေအောင် လှုပ်ခါသုတ်သင်လေ့ရှိသည်။ ချင်ချီလာရှဉ့်တို့သည် အနီးအနားရှိ သစ်ပင်သစ်ရွက်များကို ကိုက်ဖြတ်၍ မိမိတို့နေထိုင်ရာတွင်းဝ၌ သိမ်းထားတတ်ကြ သည်။ ထူးဆန်းသောအကျင့်တစ်ခုမှာ မိမိတို့အသုံးချနိုင် မချနိုင်သည်ကို ဂရုမထားဘဲ လူ့အသုံးအဆောင် တိုလီမိုလီ ပစ္စည်းများကို စုဆောင်းတတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ တောထဲ၌ လှည့်လည်သွားလာသော ခရီးသည်များ ပျောက်က်ဆုံးခဲ့သည့် ဘွတ်ဖိနပ်၊ ကျာပွတ်၊ လက်ပတ်နာရီ စသည့်ပစ္စည်းများကို ချင်ချီလာရှဉ့်တို့၏ တွင်းဝနား၌ မကြာခဏ တွေ့ရတတ်သည်။
နေရင်းဒေသ၌ ချင်ချီလာရှဉ့်များ ရှားပါးသွားပြီဖြစ်သော်လည်း ထိုရှဉ့်များကို သားမွေးအတွက်သက်သက် မွေးမြူသူများသည် အင်္ဂလန်နှင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တို့တွင် ရှိကြသည်။ အချို့သူတို့သည် ချင်ချီလာရှဉ့်၏ သားမွေးမျိုးရှိသော တွင်းအောင်း ယုန်များကိုလည်း ယခုအခါ မွေးမြူလျက်ရှိကြသည်။
တောင်အမေရိကတိုက်တွင် ရှေးကျသော အင်းကားလူမျိုး တို့၏ လက်ထက်ကစ၍ ချင်ချီလာရှဉ့်များကို ဖမ်းဆီးလာခဲ့ကြ သည်။ အဆိုပါအင်းကား လူမျိုးတို့သည် ဂရိုင်ဆန်ခေါ် မြွေပါမြီးတို တစ်မျိုးကို အသုံးပြု၍ ချင်ချီလာရှဉ့်များကို တွင်းထဲမှ လိုက်လံမောင်းထုတ်၍ ဖမ်းဆီးကြသည်။ သို့သော် ချင်ချီလာရှဉ့်တို့သည် အလွန်မျိုးပွားလွယ်သောကြောင့် ယခုတိုင် မျိုးမပြုတ်ဘဲ ကျန်ရှိကြသေးသည်။ ချင်ချီလာရှဉ့်အမြောက်အမြား နေထိုင်ရာဒေသတွင် မြင်းစီးသွားလာသူများသည် တွင်းကျွံ၍ သေဘေးတွေ့တတ်ကြသဖြင့် အထူသတိထားကာ သွားလာကြရသည်။
↑ "Chinchilla chinchilla" (2016). IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T4651A22191157.en.
↑ Woods, C. A. and Kilpatrick, C. W. (2005). Infraorder Hystricognathi. In: D. E. Wilson and D. M. Reeder (eds), Mammal Species of the World, pp. 1538–1599. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, USA.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ချင်ချီလာရှဉ့်&oldid=719990" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။